तथ्यांकोवाच : बेसार खेतीमा विद्यमान सम्भावना | गृहपृष्ठ
Home अंक समाचार तथ्यांकोवाच : बेसार खेतीमा विद्यमान सम्भावना
काठमाडौं (अस) । नेपालको जलवायु बेसार खेतीका उपयुक्त भएता पनि केही वर्षयता बेसारको आयात भने बढ्दो क्रममा रहेको छ । विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा बेसार आयातको औसत वार्षिक वृद्धि करीब ५७ प्रतिशत देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा करीब रू. १७ करोडको बेसार आयात भएको छ । यस अवधिमा रू. ३७ लाख बराबरको करीब १४ मेट्रिक टन बेसार निर्यात भएको छ । उक्त बेसार भारत लगायत फ्रान्स, जर्मनी, चीन र ताइवान (चीन) लगायत देशमा निर्यात भएको हो ।
नेपालले आयात गर्ने अधिकांश बेसार भारतबाट आएको देखिन्छ भने म्यानमार पनि बेसारको प्रमुख स्रोतका रूपमा देखा परेको छ । आव २०७३/७४ मा नेपालमा ६५ हजार ९९९ मेट्रिक टन बेसार उत्पादन भएको पाइन्छ भने १ हजार २९१ मेट्रिक टन बेसार आयात भएको छ । यसरी नेपालमा बेसारको कुल आन्तरिक खपत ६७ हजार २७६ मेट्रिक टन रहेको देखिन्छ ।
बेसारको विश्व उत्पादन स्थिति
बेसार उत्पादनका दृष्टिले भारत अग्रस्थानमा छ । एग्रिवाचका अनुसार भारतमा गतवर्ष २०१७÷१८ मा ४७६,७७१ मेट्रिक टन बेसार उत्पादन भएको थियो । यो विश्व उत्पादनको करीब ८० प्रतिशत हो । बाँकी बेसार चीन, म्यानमार, पाकिस्तान, नेपाल लगायत देशमा उत्पादन भएको छ ।
बेसारको विश्व व्यापार
विश्वमा बेसारको आयात तथा निर्यात दुवैमा भारतको वर्चस्व छ । विश्वभर अदुवा व्यापारमा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इरान, बेलायतजस्ता देश प्रमुख छन् । बेसार आयातमा भारत, इन्डोनेशिया, भियतनाम लगायत देश शीर्षस्थानमा छन् ।
नेपालका सम्भावना :
विश्वभर बेसारप्रति आकर्षण बढ्दो छ । सन् २०१४ देखि २०१८ को अवधिमा विश्वभर बेसारको आयात औसतमा वार्षिक १६ प्रतिशत बढेको छ । उत्पादन बढाएको खण्डमा विश्वबजारमा नेपाली बेसार निर्यात गर्ने सम्भावना एकातिर छ भने अर्कोतिर मुलुकको बेसार आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
यसका लागि सरकारले गुणस्तरका प्रावधान पूरा गर्नेगरी प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्नुका साथै बेसार क्षेत्रलाई करमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै, बेसार उत्पादक कृषकलाई अनुदान, प्रोत्साहन र आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पनि आवश्यक छ ।